Indawo efihlakeleyo, yabucala, efikelelekayo kwiFirefly Guest House - I-Airbnb
Indawo efihlakeleyo, yabucala, efikelelekayo kwiFirefly Guest House
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLamar
Yima wedwa indlu yeendwendwe kwindawo entle yabucala enemithi. Ibhedi yenkosi ethokomeleyo kunye nesofa yenkosikazi yokulala, igumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa elineshawa enkulu, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (isitovu, ifriji kunye nemicrowave) kunye nebha yekofu eneKeurig. Ukuhamba okufutshane ukuya eNashville, eFranklin, eLeipers Fork kwaye kufuphi ne-I-40, I-65 kunye ne-I-840. Ibhedi yomntwana iyafumaneka xa iceliwe.
Baleka ukuxakeka kobomi. Yiza uhlale apho umoya uhlaziyekileyo, imithi mide kwaye inobungangamsha, izilwanyana zasendle zininzi kwaye ubusuku buzolile, buzolile kwaye buzolile. Sizama ukunika indawo ezolileyo, ekhululekileyo apho ungafuni ukuhamba kwaye xa usenza njalo, uyakulangazelela ukubuya.
UFirefly luhlobo lwendawo yokufunda incwadi, ukumamela umoya uvuthuza emithini, ukujoja umoya omtsha, ungenzi nto ukuba nawe awufuni. IFirefly ikufuphi neNashville kunye neFranklin, TN kunye neNatchez Trace Parkway, iMontgomery Bell State Park, kunye nentabalala yemilambo yokukhwela inqanawa, ukukhwela amaphenyane, ukukhwela isikhephe kunye nokuloba. I-Bowie Nature Park enechibi, iindlela zokuhamba, iigrill kunye nezixhobo zendawo yokudlala ikufuphi.
I-Firefly Guest House yi-900 square feet studio enebhedi yobukhulu bokumkani, indawo yokulala yesofa, umabonakude, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, intambo kunye ne-intanethi kunye nendawo yokutyela. Indlu yangasese yahlaziywa ngoJanuwari 2020! Yiza uhlale ubusuku, ubusuku obuninzi, iveki okanye ngaphezulu!
Indlu yeeNdwendwe iFirefly ikwindawo yelizwe enefama kunye nezitali zamahashe ezikufutshane. Sifumaneka ekupheleni kwendlela yabucala kwaye awuboni naziphi na ezinye izindlu ngaphandle kokuba amagqabi aphumile emithini.
Singaphandle nje kwedolophu encinci kodwa ekhulayo yaseFairview, TN. Uluntu lwethu luneWalmart, ivenkile yegrosari yasePublix, iTractor Supply, McDonald's kunye neHardees ukongeza kwezinye iivenkile zasekhaya kunye neendawo zokutyela.
Sinikezela ngencwadana enoluhlu lwezinto esizithandayo ukwenza.
My wife (Cindy) and I are honored to welcome you to Firefly Guest House. We have high expectations for where we stay when we travel. We expect places we stay to be clean, quiet,…
Indlu yeeNdwendwe zeFirefly ikwindawo enye yeehektare ezisi-7 njengendawo yethu yokuhlala yabucala engama-3600 sq ft. Sifumaneka ngokulula ukujongana nayo nayiphi na imiba okanye iinkxalabo. Ngaphandle koko, sisenokungaboni ngasonye!
Sinokukumema ukuba uhlanganyele nathi ukuba sitshaya i-brisket okanye iimbambo ngexesha lokuhlala kwakho! Singabamkeli bokwenene basemazantsi abathanda ukudibana nabantu, ukusela iti eswiti kunye nokubonelela ngobubele basemazantsi.
Indlu yeeNdwendwe zeFirefly ikwindawo enye yeehektare ezisi-7 njengendawo yethu yokuhlala yabucala engama-3600 sq ft. Sifumaneka ngokulula ukujongana nayo nayiphi na imiba okanye i…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Fairview